रामेछापबाट बिहानै आयो दुखद खबर: आगलागीमा परेर एघार महिने बच्चाकाे यस्तो विभत्स! – PathivaraOnline
Home > समाज > रामेछापबाट बिहानै आयो दुखद खबर: आगलागीमा परेर एघार महिने बच्चाकाे यस्तो विभत्स!
रामेछापबाट बिहानै आयो दुखद खबर: आगलागीमा परेर एघार महिने बच्चाकाे यस्तो विभत्स!
रामेछाप – रामेछाप नगरपालिकां—६, डाङसिङटारका शंकर वहादुर मगरको घरमा आगलागीका कारण घर जल्दा उनका ११ महिने छोरा दिपेन्द्र मगरको डढेर ज्यान गएको छ । आगलागी हुँदा सोमबार दिउँसो घरमा बालक सुताएर वस्तुलाई घाँस काट्न गएकी दिपेन्द्रकी आमालाई गाउँलेहरुले बोलाएका थिए । उनी घर आइपुग्दासम्म दिपेन्द्रको ज्यान गैसकेको थियो ।
गर्भमा छोरा छन् कि छोरी भनेर हेर्न श्रीमतिको पेट हँ’सि’याले यसरी चि’रिदिए
श्रीमान विदेशमा हुँदा जेठाजुसंग सुतेर बच्चा जन्माएपछि अहिले यस्तो सहमति गरे, गाउँ नै छक्क! (भिडियो हेर्नुस्)